किन Assertive हुनु महत्त्वपूर्ण छ र कसरी Assertiशीलता सुधार गर्न को लागी - व्यक्तिगत विकास क्याफे
किन Assertive हुनु महत्त्वपूर्ण छ र कसरी Assertiशीलता सुधार गर्न को लागी
पोस्ट व्यवस्थापक | अक्टोबर 9, 2019 | आत्म-सुधार, व्यक्तिगत विकास, सकारात्मक सोच |0|
1 दृढ हुनुका फाइदाहरू
1.1 एक दृढ दृष्टिकोण अपनाउने
1.1.1 Assertive हुँदा कुनै भन्नुको महत्त्व
मुखर हुन सिक्नु तपाईको विकास गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल हो। अध्ययनले देखायो कि जोडदार हुनुले बेफाइदाको सम्पूर्ण मेजबान लिन सक्छ, आत्मविश्वास बढेको देखि राम्रो सम्बन्धहरू सम्म र मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य सुधार.
तपाईंले सुरू गर्नु अघि, दृढ हुनुको मतलब के हो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। मनोवैज्ञानिकहरूले दृढतालाई परिभाषित गर्छन् आफैंलाई प्रभावकारी रूपमा अभिव्यक्त गर्न र अरूको अधिकार र विश्वासहरूको सम्मान गर्दा तपाईंको दृष्टिकोणको लागि खडा हुन सक्षम हुन।
दृढ हुनुका फाइदाहरू
दृढता को आधार पारस्परिक सम्मान र ईमानदारी छ। दृढ कम्युनिकेटरहरू सिधा छन् र स्वास्थ्य चौकीहरू कसरी सेट र मेन्टेन गर्ने जान्छन्। उनीहरूको सम्बन्धले विश्वासलाई महत्व दिन्छ र प्रचार गर्छ।
यदि तपाईं एक प्रामाणिक जीवन बाँच्न र आफ्नो लक्ष्यहरू पुग्न सफलको बारेमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने, दृढ हुन सिक्न महत्त्वपूर्ण छ। अहिले तपाईको जीवनको बारेमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ सोच्नुहोस्।
के तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के तपाईं द्वन्द्वबाट बच्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ? के तपाईं चिन्ता गर्नुहुन्छ अन्य व्यक्तिले तपाईंको बारेमा के सोच्दछन्?
यदि तपाईं अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईं खुसी हुनुहुन्न भने, शुभ समाचार यो हो कि जिम्मेवारी भनेको एउटा बानी हो जुन अरू कुनै कुराजस्तै जान्न सकिन्छ। र एकचोटि केहि बानी हुन थाल्यो, यसलाई कम र कम इच्छाशक्ति लिन्छ।
अभ्यास र प्रतिबद्धता संग, तपाईं तपाइँको मानसिकता परिवर्तन गर्न सक्दछ र तपाईंको वास्तविक मूल्यमान्यताहरू र आकांक्षाहरूको साथ अधिक लाइफ लाइफ गर्नुहोस्।
एक दृढ दृष्टिकोण अपनाउने
तपाईको जीवनमा अझ बढी दृढ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नका लागि यी सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस्:
तपाइँको प्राथमिकताहरू के हो निर्णय गर्नुहोस् र तिनीहरूमा लाग्नुहोस्।
तपाईंको व्यक्तिगत सीमानामा काम गर्नुहोस्।
सकारात्मक खुला आसन विकास गर्नुहोस् र आँखामा नै मानिसहरू हेर्नुहोस् जब तपाईं उनीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ।
सकारात्मक 'म' बयानहरू प्रयोग गर्नुहोस् कसरी तपाईंलाई दोष लगाउनुको सट्टामा अर्को व्यक्तिको साथ दोष खोज्नुको सट्टा तपाईले महसुस गरिरहनु भएको छ। 'तपाईं जहिले पनि' वा 'तपाईंले कहिले गर्नुहुन्न' भन्न प्रलोभनमा पर्न विशेष गरी सावधान हुनुहोस्।
आफूले गर्न नचाहेको वा गर्न नसक्ने चीजहरूमा 'होईन' भन्दै सहज हुनुहोस्। यसलाई सरल र गैर-भावनात्मक राख्नुहोस् र महसुस नगर्नुहोस् कि तपाईंले बहाना वा स्पष्टीकरण थप्न आवश्यक छ।
केवल 'माफ गर्नुहोस्' प्रयोग गर्नुहोस् जब यो अवस्थाको लागि उपयुक्त छ। होईन भनेर माफी माग्नु पर्दैन।
तपाईंलाई मन नपर्ने प्रस्तावहरूको लागि वैकल्पिक सुझावहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्।
इमान्दार र आफ्ना भावनाहरू, विचार, र इरादाको बारेमा सीधा हुनुहोस्।
अप्ठ्यारो महसुस गर्ने परिस्थितिको लागि स्क्रिप्ट लेख्न विचार गर्नुहोस्। पूर्वाभ्यास गर्दै
Assertive हुँदा कुनै भन्नुको महत्त्व
कहिलेकाँही 'होईन' भन्नाले सबैभन्दा शक्तिशाली र ठाडो भनाइहरू मध्ये एक हो। तपाईले गर्न चाहानु हुन्न वा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा तपाईलाई सहज हुन पर्छ। यो गर्नाले तपाई अरूलाई पनि थाहा दिनुहोस् तपाईं तपाईंको आफ्नै निर्णय लिन अधिकार छ।
जब 'होईन' भन्दै, यदि सम्भव भए प्रयास गर्नुहोस् र यसलाई गैर-भावनात्मक राख्नुहोस्। त्यहाँ एक ठूलो छ मुखर र आक्रामक व्यवहार बीचको भिन्नता.
एक आपसी सन्तोषजनक समाधान खोज्नको लागि सँगै मिलेर काम गर्ने तरिकाको प्रभावमा तपाईंको ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
सबै भन्दा माथि, दृढ हुनुको मतलब तपाईंको शक्तिमा रहनु, यो स्वीकार्नुपर्दछ कि तपाईं कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ तपाईं कसरी परिस्थितिमा पुग्ने नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र यसका बारे तपाईंको भावनाहरू।
दृढतापूर्वक तपाईलाई सँधै प्राप्त गर्न सजिलो हुँदैन, तर तपाई नियन्त्रणमा महसुस गर्नुहुनेछ र पहिलेको तनावपूर्ण अवस्थाका साथ अझ राम्रो व्यवहार गर्नुहुनेछ।
पछिल्लोसोच्नुहोस् र रिच बढाउनुहोस् #1 निजी विकास पुस्तक
अर्कोचिन्ताको लागि CBD तेल - महत्त्वपूर्ण चीजहरू जुन तपाईंलाई तपाईंले जान्नु आवश्यक छ
कसरी सकारात्मक आत्म कुरा तपाईंको जीवन लाई रूपान्तरण गर्न सक्दछ
तपाइँका लक्ष्यहरू कसरी हासिल गर्ने7प्रभावी चरणहरू
यदि हामीले गर्न सक्ने सबै चीजहरू गर्छौं भने हामी शाब्दिक रूपमा छक्क पर्छौं।